घर परिवारले फोन गरेर चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। मलाई पनि परिवारको उत्तिकै चिन्ता लाग्छ- साउदी अरबबाट सुवास न्यौपाने
नेपाल घर परिवारले फोन गरेर चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। मलाई पनि परिवारको उत्तिकै चिन्ता लाग्छ- साउदी अरबबाट सुवास न्यौपाने
Nepal Online Patrika| Kathmandu: नाम: सुवास न्यौपाने
हाल: साउदी अरब
म सन् २०१२ मा साउदी आएको हुँ र यहाँ एक स्टिल बनाउने कम्पनीमा काम गरिरहेको छु। परिवारसँग सरसल्लाह गरेर यहाँ आइयो। ८ वर्षसम्म यहाँ काम गरेर घर हेरियो। अब अझै यहाँ बस्न मन छैन। अब छिटै फर्किन्छु भन्ने सोच छ।
अहिले यहाँको अवस्था भयावह छ। सबैका मुखमा मास्क लगाएको देख्न सकिन्छ। बाहिर निस्किन डर छ। बिहान बेलुका शरीरको तापक्रम जाँच गर्नुपर्छ। तापक्रम अस्वाभाविक पाइएमा तत्काल स्वास्थ्य उपचारका लागि खबर गर्न भनिएको छ। त्यसै गरी बिहान बेलुका २ पटक भाइरस मार्ने औषधि छर्किने गरिएको छ।
भाइरसको प्रभाव फैलिन नदिन यहाँ भरमग्दुर प्रयास गरिएको छ। २ जनाभन्दा बढीलाई एकै ठाउँ भेला हुन दिइँदैन। साथीहरू नै भए पनि एकै पटक २ जनाभन्दा बढीसँग भेट गर्न पाइँदैन। हामीले पनि सरकारको नियमलाई पूर्णता पालन गरिरहेका छौँ। मास्कको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाएका छौँ। साथीहरूसँग कुरा गर्नुपर्दा पनि टाढाबाटै कुरा गर्ने गरेको छु।
म सँगै अरू १० जना साथीहरू पनि छन्। सबै जना सावधानी अपनाएर बसेका छौँ। तर पनि चारैतिर कोरोनाको सन्त्रास छ। हामी पनि एक किसिमको डरले प्रताडित छौँ। यहाँको सरकारले आफूले सकेको गरिरहेको छ। हामीलाई यहाँका नागरिकहरूसँग तुलना गर्ने हो भने कुनै भेदभाव गरिएको छैन। श्रमिकहरू कोरोना सङ्क्रमित भएमा यहाँका नागरिक जस्तै नि:शुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरिएको सुन्नमा आएको छ। हामीहरूलाई कम्पनीको तर्फबाट बेला-बेला मिटिङ गराइ कोरोनाको लक्षण र कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ? भन्ने बारे जानकारी समेत गराइएको छ।
यति हुँदा-हुँदै पनि डर र त्रासमा भने कमी आएको छैन। सबैमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिहाल्छ कि भन्ने त्रास छ। विशेषगरि नेपालीहरूमा सङ्क्रमण भइहाल्यो भने कम्पनीले र यहाँको सरकारले यहीँका नागरिक जस्तो उपचारको व्यवस्था नगरिदिने हो कि! भन्ने आशङ्का मनमा उब्जिन्छ। उपचार ढिलो र राम्रोसँग नभइदिएमा के गर्ने होला? भन्ने डर र द्विविधा छ।
नेपालमा भएको मेरो परिवार र छरछिमेकमा आजको दिनसम्म कोही सङ्क्रमित भएको जानकारी पाइएको छैन। तर घर परिवारले फोन गरेर चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। मलाई पनि परिवारको उत्तिकै चिन्ता लाग्छ। एक अर्कालाई सम्झाइ बुझाइ गर्छौँ। अब यो प्रकोप नसकिन्जेलसम्म यस्तै चलिरहन्छ होला। त्यसैले यो रोग छिटै संसारबाट निर्मूल होस् भन्ने कामना गरिरहेको हुन्छु।